Idatha yabakhweli eyebiwe e-Bangkok Airways kuhlaselo lokhuseleko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Idatha yabakhweli eyebiwe e-Bangkok Airways kuhlaselo lokhuseleko
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Uphando lokuqala lwesigameko lubonakele ukuqinisekisa ukuba ezinye zeedatha zobuqu zinokufikeleleka, igama lomkhweli, igama losapho, ubuzwe, isini, inombolo yefowuni, i-imeyile, idilesi, ulwazi loqhakamshelwano, ulwazi lwepasipoti, ulwazi malunga nokuhamba, Ulwazi lwekhadi letyala, kunye nolwazi olukhethekileyo lokutya.
I-Bangkok Airways Public Company Limited yayixhoba lokuhlaselwa kwe-cybersecurity.
Uhlaselo lubangele ufikelelo olungagunyaziswanga nolungekho mthethweni kwinkqubo yolwazi yenqwelomoya.
Esi siganeko sixeliwe kumapolisa aseRoyal Thai kunye nokunikezela ngesaziso kwabasemagunyeni abafanelekileyo.
Nge-23 ka-Agasti ka-2021, i-Bangkok Airways Public Company Limited yafumanisa ukuba le nkampani ibilixhoba lohlaselo lokhuselo olukhokelele ekufikelelekeni okungagunyaziswanga nokungekho mthethweni kwinkqubo yolwazi.
Ekufumaneni okunjalo, Bangkok Airways kwangoko uthathe inyathelo lokuphanda kwaye aqulathe umsitho, ngoncedo lweqela lokhuseleko lwe-cyber. Okwangoku, inkampani iphanda, ngokungxamisekileyo, ukuqinisekisa idatha esengozini kunye nabakhweli abachaphazelekayo kunye nokuthatha amanyathelo afanelekileyo okomeleza inkqubo ye-IT.
Uphando lokuqala lwefayile ye- siganeko Kubonakele ukuqinisekisa ukuba ezinye zeedatha zobuqu zinokufikeleleka, igama lomkhweli, igama losapho, ubuzwe, isini, inombolo yefowuni, i-imeyile, idilesi, ulwazi loqhakamshelwano, ulwazi lwepasipoti, ulwazi ngembali yokuhamba, ulwazi lwekhadi letyala, kunye nezinto ezizodwa ulwazi ngesidlo. Inkampani, nangona kunjalo, iyangqina ukuba esi sehlo asichaphazeli ukusebenza kwenkampani okanye iinkqubo zokhuseleko lomoya.
Esi siganeko sixelwe kumapolisa aseRoyal Thai kunye nokunikezela ngesaziso kwabasemagunyeni abafanelekileyo. Kwimilinganiselo yothintelo yokuqala, inkampani icebisa abakhweli ukuba banxibelelane nabanikezeli bebhanki okanye abanamakhadi etyala kwaye balandele iingcebiso zabo kwaye batshintshe nawaphi na amagama agqithisiweyo ngokukhawuleza.
Ukongeza koku, inkampani ingathanda ukubalumkisa abakhweli ukuba babenazo naziphi na iifowuni ezikrokrisayo okanye ezingacelwanga kunye / okanye ii-imeyile, njengoko umhlaseli enokuthi ubanga ukuba yiBangkok Airways kwaye uzama ukuqokelela idatha yobuqu ngenkohliso (eyaziwa ngokuba yi 'phishing' ). Inkampani (Bangkok Airways) ayizukunxibelelana nabathengi abafuna iinkcukacha zekhadi letyala kunye nezicelo ezinjalo. Kwimeko yeso siganeko senzekayo, abakhweli kufuneka bathathe amanyathelo asemthethweni.
IBahamas ngoku lilizwe elikhuselekileyo laseMelika...
Iinqwelomoya ezintsha eziya eLas Vegas zisuka eSan Jose, eBoston...
W. Kami uthi:
Agasti 28, 2021 kwi-15: 43
Ngaba isilumkiso saseBangkokair siyinyani okanye siyinyani?
Ndiyazibuza kuba ngesiqhelo badibanisa i-imeyile ngegama lam - hayi nje 'Mthengi othandekayo'.
Ukongeza zombini iinombolo zefowuni ezinikiweyo zahlukile kumanani azo kwiiwebhusayithi zazo zangoku?